Obosara Oru: 3000mm
Herụ Ọrụ Elu: 1350mm
Arụ ọrụ ikike: 950m / h
KGS ole ka nsị anụ anụmanụ nwere ike ime kwa ụbọchị?
Akwa okpomọkụ compostingbụ irè usoro obibi anụ ụlọ na ulo ozuzu okuko nri. Ọ nwere ike imebi ihe ndị dị na anụ ụlọ na anụ ọkụkọ site na microorganism, si otú a na-ewepụta okpomọkụ dị elu, na-egbu nje ndị na-akpata ọrịa, na-eme ka humus nke ahịhịa na-eme ka mmezi fatịlaịza. Ngwunye ụka (dị ka Compost Turner) nke Nanning Tagrm Co., Ltd nwere ike bụrụ ihe na-adịghị njọ ma weghachite ihe mkpofu siri ike dịka anụ ụlọ na nri ọkụkọ. Oge akụrụngwa akụrụngwa dị mkpụmkpụ, ọkwa ọkwa ọgụgụ isi ya dịkwa n'ọchịchị ụwa.
Taa, TAGRM 's Ejirila ihe karịrị 100 mba dị ka Vietnam, Jordan, Argentina, Russia, Brazil, Ecuador, Malaysia, Kuwait, Indonesia, wdg, tinyekwa igwe na-atụgharị Compost n'ụzọ gara nke ọma na anụ ụlọ ha na ọkụkọ nsị na-ekpofu ahịhịa nsị.
.Dị M3000 Idozi ala 100mm H2
Ike ọnụego 80KW （108PS） AKITKỌ Nrụgide nke ala 0.43Kg / cm²
Ọnụego ọsọ 2200r / nkeji Obosara na-arụ ọrụ 3000mm Max.
Oriri mmanụ ≤235g / KW · h Ọrụ dị elu 1300mm Max.
ike mmanụ 120L Gaanụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Crawler zọcha 3140mm W2 N'azụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Obosara Crawler 300mm Nchara Nri n'ọdụ ụgbọ mmiri obosara 3000mm
Ojuju 3635 × 2670 × 3000mm W3 × L2 × H1 Na-atụgharị okirikiri 2100mm Nkeji
Ibu ibu 4000kg Enweghị mmanụ Drivegbọala ọnọdụ Hydraulic
Dayameta nke ala 823mm Jiri mma Ike ịrụ ọrụ 950m / h Max.
Isi akụkụ nke compost igwe ga-juru n'ọnụ ke ịgba ọtọ, ndị fọdụrụ akụkụ ga-juru n'ọnụ na igbe ma ọ bụ plastic echebe.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla pụrụ iche chọrọ maka mbukota, anyị ga-abịa dị ka arịrịọ gị.
Nke gara aga: Hot ire compost Ndinam igwe n'ihi na anụ ụlọ anụmanụ nsị n'efu
Osote: Ngwa igwe na-eme igwe compost maka anu ulo nri ala compost windrow Turner
igwe oke-igwe oke bekee
oke oyibo compost Ndinam igwe
oke oyibo fatịlaịza igwekota
oke oyibo fatịlaịza comer
oke oyibo nri ala compost windrow Turner
compost Turner organic fatịlaịza compost makin ...
Chicken nri anụ ụlọ compost Turner maka mak ...